३ बैशाख - विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरु एवं नेपालका विकास साझेदारहरुसँग विश्वास र सदभावको सम्बन्ध कायम गरी नेपालको विकास र समृद्धिमा समर्थन र सहयोग जुटाउने सरकारको नीति निरन्तर रहेको छ।
२८ चैत - चिनियाँले रेलमार्गका लागि ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलहरु बनाउने प्रस्ताव गर्छ, नेपालले ती संरचना बनाउनका लागि कति सजिलै वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने कुरा त अनुमान गर्ने मात्रै हो।
२३ चैत -
मेरा दुई दृष्टि
१५ चैत - मैले दुनियाँलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, एउटा नजरिया छ। मेरो एउटा आँखा मेरो धार्मिक आस्था, विश्वास हो। अर्को मैले मानेका ऐन, कानुन र संविधान हो।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रसँग पोखरेली आशा
१५ चैत - मेस्सीलाई नेपालको पर्यटन सदभावना राजदूत बनाएर उपल्लो मुस्ताङको पठानमा टाउकोले फुटबल नचाएको, एक्लै रहेकी एञ्जेलिना जोलीले आफ्ना ६ जना सन्तानसहित फेवाताल किनार मर्निङ वाक गरेको दृष्यसहितका विज्ञापनहरु अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा पुर्‍याउने दायित्व पनि युवा मन्त्री रवीन्द्रको काँधमा आएको छ।
फेमिनिस्ट प्रेमिकाको सम्झनामा
१३ चैत - आइमाईलाई नगन्ने लोग्नेमान्छेहरुको बीचमा हुर्केको थिएँ म। किशोरावस्थामा प्रेम वा केटीहरुसँगको निकटताको अर्थ तिनलाई आफ्नो कल्पित अनुराग चिठीमा भरेर पठाउनु र मौका मिल्नासाथ तिनको छाती निचोर्नु वा जामाभित्र हात पुर्‍याउनु हो भन्ने विश्वासमा थिएँ। अलि पछि स्कुल छाडेर कलेज प्रवेश गर्दै गर्दा मर्द हुनु...
एकतावद्ध चिनियाँ, छिन्नभिन्न हामी
१० चैत - हामी नेपाली अधिकांशको राष्ट्रप्रेम अल्पकालीन छ भन्दा फरक पर्दैन। अपमान, चोट, दुःखलाई केही दिनमै बिर्सेर अहंकार, घमण्डले यतिसम्म ग्रस्त भइदिन्छौं कि मानौं कहिल्यै मृत्युवरण पनि गर्न पर्दैन।
जब अमेरिकी राजदूतलाई ‘हेडलाइन’ बनाउन थाल्यौं
९ चैत - धन्न, इयूले निर्वाचन नै गलत भयो भनेर चाहिँ भन्न भ्याएन। खस आर्यलाई दिइएको आरक्षण गलत भयो भनेर सच्याउन भन्यो। अर्थात् नेपालमा जातीय विभाजनमा मलजल गर्ने काम उसबाट भएको देखियो जवकि यो नितान्त नेपालको मामिला हो।
२४ फागुन - नेपालको शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र सञ्चालन नेपाली आफैंले गरेका हुन्। यो वास्तवमै स्वदेशी हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिद्वारा मध्यस्थता भएको होइन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका योगदानपूर्ण हो, तर निर्णायक होइन।
१४ फागुन - म चाहन्छु, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना पूरा गरुन्। तर नागरिकको चाहना बेवास्ता नगरुन्। कुरा मात्रै होइन, काम गरुन्। तपाईं अघि लाग्नुस्, परिवर्तनका लागि जनताले साथ दिनेछन्। परिवर्तन् हाम्रै पालामा सम्भव छ।
११ फागुन - ‘यदि तिमी आफ्नो केटा साथीको मर्दपन हरण गर्न चाहन्छौ भने रेष्टुरेन्ट जाँदा उसले मगाउने खानेकुरा पहिले नै सोध र वेटर आएपछि उसका लागि ती सबै कुरा तिमीले मगाइदेऊ,’ म यो छोटो मजाक गर्ने गर्थेँ।
९ फागुन - एउटा बाहुन युवकलाई बहिनी पर्ने मामाको छोरीले यौनिक रुपमा आकर्षित गर्दिनन्। तर मामाकी छोरी (साली) देख्नासाथ मगर र ठकुरी तन्नेरीलाई ‘सेक्सुअल फिलिङ’ उत्पन्न हुन सक्दछ।
२ फागुन - अमेरिकामा लभ भनेको नितान्त केटा र केटीबीचको कुरा हुन्छ, अरु कुराले अर्थ राख्दैन। बाउबाट अंश पाउँछु भन्ने केटाको भोक पनि हुँदैन, विश्वास पनि हुँदैन। केटीका अरु विविध सम्बन्धको पनि ख्याल गरिँदैन। यहाँ त बिस्तारै पाइला चाल्दै सोधीखोजी गर्दै लभमा अगाडी बढिन्छ।
१९ माघ - विश्वास गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि उनैले झुटो बोल्दै हिडेको पीडा प्रचण्डले सहेकै थिए, तर प्रचण्डकै रक्षात्मक अवतरणका निम्ति पार्टी एकता अपरिहार्य बनेको थियो।
स्वराजको नेपाल भ्रमण: ‘पर्ख र हेर’काे स्थितिमा चीन
१८ माघ - विदेशमन्त्री स्वराजको तयारी विनाको यस भ्रमणलाई लिएर भारत र नेपालमा जति तहल्का मच्चिएको छ, त्यसको पूर्वप्रभाव चिनियाँ संचारमाध्यममा खासै देखिँदैन।
चितुवा लुक्ने झाडीमा सात दिनपछि यसरी भेटिए जोन तामाङ
१७ माघ - उनी भेटिएको ठाउँ नजिकै चितुवाको पाइला पनि देख्यौं। एकदमै डरलाग्दो ठाउँ छ त्यो। वरिपरि बँदेलले खनेको ठाँउ एकदमै धेरै देखिन्छ। चितुवा र मृग सुतेको ठाउँ पनि धेरै देखिन्छ।
६ माघ - प्रदेशका पितासमान हुने प्रदेशप्रमुख नियुक्तिपछि म कालिकास्थानमा रहेको सर्वनाम थिएटरमा काशीदेवीको दर्शक बनेको थिएँ। काशीदेवीका पात्र मलाई निरंकुश तानाशाही बर्बर पञ्चायतको पृष्ठभूमिमा लैजान चाहन्थे। म चाहिँ प्रदेश प्रमुखको पगरी गुथाइएका पात्रहरुलाई सम्झिरहेको थिएँ
१८ पुस - ‘नेपालको चीन ने पुरी तरहले पटा लिया यार। देखो, चीनीकी वजह से माउण्ट एभरेष्ट में इण्डियाको नही रखा। अब भारत नहीँ, चीन ने घेरना सुरू कर दिया।’
१५ पुस - सुखै छैन नजानेर। हरेक मिनेट मिनेटमा परीक्षा दिनुपर्छ। संस्कारको! कहिले छोरी, कहिले बुहारी, कहिले दिदीबहीनी, कहिले भाउजू, कहिले प्रेमिका अनि कहिले आमा र हजुरआमा बनेर।
११ पुस - म दाबीका साथ भन्छु, पोखराबाट देखिने माछापुच्छ्रेको जुन आकृति छ, त्यो अर्ब डलरको छ। त्यसलाई हजारमा पनि बेच्न नसक्ने नेपाली मान्छेलाई कसरी राम्रो भनुँ? नेपालीहरु राम्रा हुन्थे भने स्वीट्जरल्याण्डलाई काँचै खान्थ्यो पोखराले।
१४ मंसिर - सर्लाहीबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोको क्रमशः महोत्तरी र धनुषा आगमन, अनि मोरङ्ग तथा सुनसरीबाट उपेन्द्र यादवको सप्तरी प्रवेश जातिवाद प्रवद्र्धनका निम्ति संरक्षित भूमिको चयन बाहेक अरू केही देखिन्न। राजनीतिक परिदृष्यमा आफूलाई बचाई राख्न जातीय बर्चस्व रहेको स्थानको खोजी हो यो।
११ मंसिर - त्यो दिन मैले भक्तपुर सिरुटार पुगेर ८६ वर्षका बा र ७९ वर्षकी आमासँग दुई घण्टा बिताएँ। टिभी टक शोमा गएको भए म बा आमालाई भेट्न जान सक्ने थिइनँ।
१० मंसिर - मलाई नेपाली राजनीतिक दलका विचार र नेतामा भन्दा हुन्डरीमा बढी विश्वास छ। हुन्डरी, जसले भाग्य र दुर्भाग्यसँगै लिएर आउँछ।
८ मंसिर - आफन्तहरुले विष्णु खड्कालाई जबर्जस्ती फुत्काउन सफल भए। आफन्तको पासमा पुगेका विष्णुलाई कब्जामा लिन नसक्ने भएपछि उनीहरूले छाडिदिए र मलाई लिएर हिंडे।
२४ कार्तिक - ‘टाढाबाट’ स्तम्भ एउटा पहाडको चुचुरोबाट अर्को पहाडको चुचुरोको आकृती नियाल्ने प्रयास हुनेछ। यो स्तम्भ, हिलारी स्टेपबाट होइन तेङबोचेबाट सगरमाथाको चित्र उतार्ने प्रयास हुनेछ। पोखराबाट माछापुछ्रेको सुन्दरताको वर्णन गर्ने प्रयास हुनेछ।
२२ कार्तिक - नेपालमा लगानी हुने संभावनाको हरेक चिनियाँ योजनालाई कांग्रेसले विरोध र शंकाको नजरले हेरिरहेको हुन्छ। .... नेपालका कम्युनिष्टहरूले सधैं भारतलाई तारो बनाए झैं, अब नेपाली कांग्रेसले पनि चीनको विरोध गरेर त्यही बाटो अपनाएको हो?
१९ कार्तिक - भ्रममा कोही नबसे हुन्छ, आउने सरकार वाम गठबन्धनकै हो। आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सजिलो बहुमत मात्रै ल्यायो भने पनि मधेश केन्द्रित दल, राप्रपा र कांग्रेसमा सुरक्षा र अवशरको लागि आएका र चुनाव जितेकाहरुलाई सजिलै वाम सरकारको समर्थनमा आउने कानुनी बाटो सहज बन्ने छ।
१७ कार्तिक - चर्चित गायिका रंगमञ्चमाका लागि अब्बल नै हुन्। तर पुल बनाउन अब्बल मानिने इन्जिनियर बिरामीका लागि अस्पतालमा कुनै मानेमा पनि अब्बल ठानिँदैन।
२ कार्तिक - पाँच वर्षभित्र सीले २८ वटा विदेश यात्रा गरे, १९३ दिन विदेश डुले। पृथ्वीका पाँचै महादेशका ५६ मुलुक टेके। तर दक्षिण एसियाली क्षेत्र, नेपालको नजिकै पुगेर पनि सीले होला होलाजस्तो भइसकेको नेपाल भ्रमण गर्न सकेनन्।